सुन्दर हुन सर्जरी - सौन्दर्य - प्रकाशितः माघ १५, २०७६ - नारी
सुन्दर हुन सर्जरी
आँखा सानो हुनु, नाक सुलुत्त नपर्नु वा स्तनको आकार सानो–ठूलो हुनु, कोठी आउनु कुनै रोग होइन । न त्यो शरीरको कुनै कमजोरी हो । तर, यसलाई समस्याका रूपमा लिनेहरूको ठूलो पंक्ति छ । सुन्दर देखिने होडमा सबै छन् । मनोविद् अर्चना हाडा मनोवैज्ञानिक कारणले आफूलाई कमजोर वा अनाकर्षक महसुस गराउँछ, आत्मविश्वास घटाउँछ ।
अहिले धेरै नेपालीले अनुहार सर्जरी गर्न थालेका छन् । आँखा, कान, छाला, नाक, मुख आदिको सर्जरी गरेपछि अनुहार पूर्ण सुन्दर हुन्छ । अनुहारको सर्जरी रिकन्स्ट्रक्टिभ र कस्मेटिक गरी दुई किसिमको हुन्छ ।
अनुहार पोलिएको छ वा पूरै अनुहारमा रौं आएको छ भने त्यसलाई हटाउन रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी गरिन्छ । अनुहार अङ्गभङ्ग भएर नराम्रो देखिएको छ भने त्यसलाई हटाउन पनि यस्तो सर्जरी गरिन्छ । बाहिरी कारणले अनुहार बिग्रिएको छ भने पनि रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी गरिन्छ ।
कस्मेटिक सर्जरी अनुहार राम्रो बनाउन गरिन्छ । विशेष गरेर आफूलाई सुन्दर देखाउन चाहनेले यस प्रकारको सर्जरी गर्ने गरेका छन् । विदेशमा धेरै कलाकारले यो सर्जरी गर्छन् । अनुहारमा नमिलेको भाग र चाउरी परेको छालालाई तन्काउनदेखि सुन्दर अनुहार तथा शरीरका लागि कस्मेटिक सर्जरी गर्न सकिन्छ । नेपालीहरू खासै प्लास्टिक सर्जरीबारे जानकार छैनन् ।
कसरी गर्ने कस्मेटिक सर्जरी ?
अरूको लहैलहैमा लागेर कस्मेटिक सर्जरी गर्नुभन्दा राम्रोसँग बुझेर गर्नुपर्छ । कस्मेटिक सर्जरी दुई प्रकारले गर्न सकिन्छ । एउटा सर्जरी र अर्को सुईको माध्यमबाट । जुनसुकै उमेर समूहले कस्मेटिक सर्जरी गर्न मिल्छ । नेपालमा विशेषगरी युवाहरूले प्लास्टिक सर्जरी गर्छन् । जन्मजात अनुहारमा वा शरीरको देखिने भागमा कुनै खोट भएमा कस्मेटिक सर्जरी गरिन्छ ।
डाक्टरसँगको काउन्सिलिङपछि प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो लहडका भरमा गरिने कुरा होइन । सर्जरी किन गर्ने, गरेपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ, पहिले नै जानकार हुनुपर्छ । कस्मेटिक सर्जरी नेपालमै गरिँदै आएको छ । नेपालमा यो सेवा सर्वसुलभ पाइन्छ । नेपालमा रहेका युवाहरू प्लास्टिक सर्जरीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । हङकङ, जापान, बेलायततिर बस्ने नेपाली भने उताभन्दा यतै सस्तो पर्ने भएकाले नेपाल आउने गरेको डाक्टर शाक्यले बताए ।
कस्तो अवस्थामा गरिन्छ सर्जरी ?
साना आँखालाई ठूलो पार्न, लाम्चो देखाउन सर्जरी गरिन्छ । झोल्लिएको छाला, नमिलेको गाला, निधार आदि मिलाउन, आगोले पोलेको दाग हटाउन, बाङ्गो कान सामान्य बनाउन । ओठ र तालु फाटेको बनाउन, ओठ सानो–ठूलो बनाउन । आँखाको तलपट्टि जमेको बोसो र कालो भाग हटाउन ।
अनुहारमा कस्मेटिक सर्जरी गरेपछिको अवस्था
कस्मेटिक सर्जरी गरेपछि सामान्य अवस्थामा आउन एकदेखि चार हप्तासम्म लाग्न सक्छ । सर्जरी गर्दा सुन्निने वा नीलो डाम बस्ने भएकाले त्यो निको हुन समय लाग्छ । त्यसकारण केही समय आराम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आकर्षक ओठ र गालामा डिम्पल
सुन्दर भनिने अभिनेतृहरू हेरेर ‘फलानीजस्तो’ बनाइदिनू भन्दै युवतीहरू डाक्टरलाई ओठको क्ल्यू दिन्छन् र डाक्टरले त्यसैअनुसार चिटिक्क मिलाइदिन्छन् । यसलाई ‘लिप इन्ह्यान्समेन्ट’ भनिन्छ । पातलो ओठलाई ‘फिलर्स’ राखेर ठूलो देखाउँछन् । ओठमा राखिने ‘फिलर्स’ मानव शरीरमा पाइने एक प्रकारको तत्त्वबाट बनाइने भएकाले यसले कुनै असर नगर्ने र नेचुरल लुक दिने डा. स्वाती अग्रवाल बताउँछिन् ।
भारतीय अभिनेतृ प्रीति जिन्टाको जस्तै डिम्पल चाहने युवतीहरू थुप्रै भएको डा.अग्रवाल बताउँछिन् । ‘डिम्पल क्रिएसन’ नाम दिइएको यो सर्जरी मोडलिङ वा अभिनयलाई करिअरका रूपमा अघि बढाउन चाहने युवतीले गरिरहेको बताइन्छ । धेरै महँगो नपर्ने भएकाले धेरै युवतीले डिम्पल बनाउन चाहने गरेको डाक्टरहरू बताउँछन् । चिउँडोको आकृति बदल्ने ‘चिन काउन्टरिङ’, कानका लागि ‘इअर रिफ्रेसिङ’ गर्न चाहने पनि कस्मेटिक सर्जरी सेवा उपलब्ध हुने अस्पतालमा धाइरहेका छन् ।
स्तन घटाउने र बढाउने बराबरी
स्तनभित्र सिलिकन राखेर ठूलो देखाउने विधिलाई ‘ब्रेस्ट इम्प्लान्ट’ भनिन्छ । डा. शाक्यका अनुसार सिलिकन मानिसको शरीरभित्र ‘एड्जस्ट’ भएर बस्ने र कुनै हानि नगर्ने विशेष प्रकारको रबर हो । स्तनको आकारअनुसारको साइजको सिलिकन स्तनभित्र राख्नुपर्ने डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । सय सीसीदेखि सुरु हुने सिलिकनको साइज ४ सय ५० सीसी वा त्यसभन्दा माथि हुने जानकारी डा. प्रधानले दिए । नेपालमा सयदेखि २ सय ५० सीसीसम्मका सिलिकन स्तनभित्र राखेर साइज बढाउने गरिएको डा. रीमा श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
पेट र हिप रिपेयर गर्नेहरू
खानपान र आरामदायी जीवनशैलीले पेट वरिपरि बोसो लागेर भद्दा देखिने समस्या सहरवासीमा धेरै देखिन्छ । शारीरिक अभ्यासबाट भन्दा सर्जरीकै माध्यमबाट ‘छिनेको कम्मर’ बनाउन चाहने महिला र पुरुषको संख्या बढ्दो छ । ठूलो हिप र थाई भएकाहरूले पनि अप्रेसन गरेर सानो बनाइरहेका छन् । कस्मेडमा मिस नेपाल रुबी राणा शाहले लाइपोसक्सन प्रक्रियाद्वारा पेट वरिपरिको बोसो घटाएकी थिइन् । यो प्रविधिबाट सानो प्वाल बनाएर अनावश्यक बोसो झिक्ने गरिन्छ । पेटमा झोल्लिएको छाला चिटिक्क पारेर मिलाउने ‘टमी टक’ अप्रेसन गराउनेहरू पनि बढ्दैछन् । यसमा प्राय: बालबच्चा भएका सेलिब्रेटी महिलाहरू बढी छन् । यसले जस्तो पहिरन पनि लगाउन सकिने र स्मार्ट देखाउने हुँदा धेरैको आकर्षण बढेको मिस नेपाल शाह बताउँछिन् ।
ट्रान्सजेन्डरका लागि पनि सर्जरी सुविधा
यौनिक अल्पसंख्यकका लागि पनि विभिन्न कस्मेटिक सर्जरी सेवा नेपालमै उपलब्ध छन् । ‘मेल’ बाट ‘फिमेल’ बन्न चाहनेका लागि ब्रेस्ट इम्प्लान्ट अप्रेसन, अण्डकोष निकाल्ने, अनुहार सानो देखाउने कस्मेटिक सर्जरी पनि नेपालमै गरिन्छ । फिमेलबाट मेल बन्नेका लागि ब्रेस्ट निकाल्ने अप्रेसन पनि गर्ने गरिएको छ ।
असार ७, २०७७ - स्लिम हुन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स
वैशाख २५, २०७७ - महिला पनि बुद्धत्वमा उपलब्ध हुन सक्छन्
वैशाख ८, २०७७ - मोटोपन हुन नदिन
आखाँ वरिपरिको चाउरी हटाउन ‘ब्लेफरोप्लास्टी’ माघ १४, २०७८
सौन्दर्यकर्मी शान्ति सम्मानित माघ ९, २०७८
जाडोमा छालाको स्याहार पुस २१, २०७८
पार्टी मेकअप मंसिर १३, २०७८
केशको प्राकृतिक उपचार कार्तिक १४, २०७८
सुन्दर आँखीभौं ‘माइक्रोब्लेडिङ’ आश्विन १५, २०७८